အောင်စိုးမြင့် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အောင်စိုးမြင့်၊ ဦး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
တောင်ငူ မဲဆန္ဒနယ် ၂
(1952-08-03) ၃ ဩဂုတ်၊ ၁၉၅၂ (အသက် ၆၈)
ဦးအောင်စိုးမြင့် သည် တောင်ငူမြို့နယ် ကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံရေး သမားနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဦးအောင်စိုးမြင့်သည်၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၆၈% (၂၁,၃၆၉ မဲ) ဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးသည်။
ဦအောင်စိုးမြင့်သည် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၈၈၈၈ အရေးအခင်း တွင် တောင်ငူခရိုင် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့တွင် ဗဟိုတိုက်ခိုက်ရေးကော်မတီဝင်အဖြစ်ဖြင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ၈၈၈၈ အရေးအခင်း ၁၅ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားပြုလုပ်ရန် ဦးဆောင်ခဲ့မှုကြောင့် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို အကြောင်းပြကာ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၀၃ မှ ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈ အထိ သရက်အကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖြစ် အကျဉ်းသာ ၉,၀၀၂ ဦးကို လွှတ်ပေးခဲ့ရာတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
↑ "Names of Pyithu Hluttaw representatives announced"၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ၂ ဧပြီ ၂၀၁၂။5October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Khin Kyaw Han (1 February 2003)။ BRIEF BIOGRAPHIES OF ELECTED MPs။ 1990 MULTI-PARTY DEMOCRACY GENERAL ELECTIONS။5October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Human rights of parliamentarians: 173rd Governing Council session" (3 October 2003). Inter-Parliamentary Union. Retrieved on 1 July 2013.
↑ Released Political Prisoners from 2007 to date။ Assistant Association for Political Prisoners (Burma)။5October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "U Aung Soe Myint appeal rejected again"၊ Democratic Voice of Burma၊ 12 November 2003။5October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Chronology of Political Prisoners in Burma for September 2008"၊ Assistant Association for Political Prisoners (Burma)၊ September 2008။5October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောင်စိုးမြင့်&oldid=533831" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၃:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။